71 afọ French nwoke ịgafe Atlantic na gbọmgbọm ekara Capsule
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » 71 afọ French nwoke ịgafe Atlantic na gbọmgbọm ekara Capsule
Na-agbasa News Travel • Ịtụ egwu • Akwụkwọ akụkọ French Polynesia • Ịrụ ọrụ • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Mmanya & mmuo
Savin rụrụ ọrụ n'ụgbọ mmiri ya ọtụtụ ọnwa na obere ọdụ ụgbọ mmiri Ares nke dị na ndịda ọdịda anyanwụ France. Savin dị afọ iri asaa na otu, sikwa mba France.
O kpebiri iji ụgbọ mmiri gafee Atlantic na Wenesde na capsule oroma yiri barrel. Ebe ọ na-aga bụ Caribbean chọrọ iru ebe ahụ n'ime ọnwa 3 naanị ike ya ga-abụ oke osimiri ugbu a.
"Enwere m ọnya nke otu mita ma na m na-agagharị na kilomita abụọ ma ọ bụ atọ n'otu awa," Jean-Jacques Savin gwara ụlọ ọrụ mgbasa ozi AFP site na ekwentị mgbe ọ kwagara El Hierro na Canary Islands nke Spain.
Gavin rụrụ ọrụ n'ụgbọ mmiri ya ọtụtụ ọnwa na obere ọdụ ụgbọ mmiri Ares nke dị n'ụsọ oké osimiri ọdịda anyanwụ France.
N'iji mita atọ (10 ụkwụ) ogologo na mita 2.10 n'ofe, a na-esi na plywood a na-ekpuchi ya, mee ka ọ sie ike iji guzogide ebili mmiri na mbuso agha nke orca whales.
N'ime capsule ahụ, nke dị kilogram 450 (ihe dị ka kilogram 990) mgbe ọ tọgbọ chakoo, bụ ebe obibi nke nwere akụkụ anọ-square mita gụnyere kichin, ebe ị na-ehi ụra na ebe nchekwa. Otu olulu mmiri dị n’ala na-ahapụ ya ịchọ azụ.
Onye bụbu onye ọrụ agha ọgụ agha nke rụburu ọrụ n'Africa, Savin arụkwala ọrụ dị ka onye ọkwọ ụgbọelu na onye nchekwa ogige mba.
Ọ hapụla otu grasi gras na karama mmanya Sauternes maka Afọ Ọhụrụ, tinyere karama uhie-Saint-Emilion maka ụbọchị ọmụmụ nke 72nd na Jenụwarị 14.
Savin nwere olile anya na mmiri ga ebuga ya Martinique ma obu Guadalupe.
N’okporo ụzọ ahụ, Savin ga na-adapụsị akara maka ebe ndị JCOMMOPS na-ahụ maka mmiri iji nyere ndị na-amụ banyere osimiri aka ịmụ banyere mmiri.
Ya onwe ya ga-abu isiokwu nke ihe omumu banyere ihe nke inonye di na njide.
Ọbụna mmanya nọ n'ụgbọ ga-amụ: Ọ na-ebu Bordeaux ka a tụlee ya ma emesịa ya na nke edebere na ala iji chọpụta nsonaazụ ọnwa ndị ebugharị na ebili mmiri.
Savin nwere euro 60,000 (US $ 68,000) maka njem ya.
Canary Islands Caribbean ebu nso ụsọ oké osimiri mmetụta efu euro njem azụ France French enwe olileanya ime agwaetiti January kilomita kichin ala M nwoke agha mmiri Martinique agha ọnwa ogige ntụrụndụ nke mba Afọ ọhụrụ Abalị Fotere Afọ Ọhụrụ ụlọ nche oké osimiri abanyela park pilot nwere ike Red ụgbọ mmiri Saint search ụgbọ mmiri -ehi ụra obere Southwest ohere Spen nchekwa ọmụmụ Caribbean arịa ebili mmiri ụzọ whales acha ọcha mmanya Arụ ọrụ